Ogandà: vonjeo ny Mozean’i Ogandà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2011 8:59 GMT
Vakio amin'ny teny polski, srpski, 繁體中文, 简体中文, English
Miorina ao Kampala ny Mozean'i Ogandà, tranom-bakoka ara-poko, ara-tantara ary ireo nentin-drazana mikasika ny lova navelan'ny kolontsainan'i Ogandà. Niorina tamin'ny taona 1908 izy ity.
Vao haingana ny minisitry ny fizahantany, ny varotra ary ny indostria no nanome fahazoan-dalana hanorina tranobe misy rihana 60 eo amin'ny faritry ny tranom-bakoka ho fiasan'ny ministera. Tamin'ny loharanom-baovao hafa no nahafantarana fa ny handravana ity tranom-bakoka ity dia hanamboarana Foiben'ny Varotra lehibe indrindra aty Afrika Andrefana.
Nitsipaka ity fikasana handravana ny Mozean'i Oganda ity ny Solombavam-bahoakan'i Afrika Andrefana ary nilaza izy ireo fa ny famindrana ity tranom-bakoka ity dia sady “manimba zavatra no tsy am-piheverana”.
Tamin'ny 15 desambra lasa teo, ny mpanolontsainan'ny tanàna ao Kampala (KCC) no nanidy ny vavahady lehibe miditra sy ny birao rehetra ao amin'ny Mozean'i Oganda satria tsy nahaloa hetra ity farany.
Andiana mpitolona Ogandey no nanapa-kevitra handefa fanentanana ao amin'ny Facebook hanavotana ity tranom-bakoka ity: Fanentanana hamonjena ny Mozean'i Oganda. Ny tanjon'ny fanentanana dia “Hanajanonana ny asa fandravana ny tranombakoka naharitra indrindra any Afrika Andrefana!”:
Naorina tamin'ny taona 1908, toerana mitahiry ny fomba amam-panao sy ny tantara ny Mozean'i Oganda.
Horavana izy ankehitriny ary hosoloina tranobe misy rihana 60.
Tianay ny maneho fa mahakasika anay izy ity ka mampirisika ny mpandraharaha izahay hitady toerana hafa ho Foibeny.
Indreto ny sasantsasany amin'ireo hafatra tao amin'ny pejy Save The Uganda Museum :
Prince Edward Budadira miteny, “Ajanony ity adalàna ity”:
Aty amin'ny firenena izay tsy misy tafajanona ho lovan'ny taranaka dia ny tranom-bakoka no anankiray amin'ny zavatra avela ho azy ireo holovainy. Marika mampiray antsika zanaky mama Ogandà, anankiray amin'ny maha izy antsika sy ny zavatra antenaintsika avy amin'ny famaritana ny lasantsika. Ny fandravana an'io dia fandravana antsika koa amin'ny maha vahoaka antsika sady fanitsakitsahana ny zon'ny taranaka ho avy tsy hanana lova. Noho izany, AJANONY NY ADALANA.
Hiakiakin'ny firenena malala:
Mino aho fa misy zavatra tsy milamina amin'ireo mpitondra antsika; voalohany aloha dia nakatona noroahina ny sekoly noroahina ary ny toerana nisy azy nanjary nanirian'ny ahi-dratsy teo fotsiny am-polo taonany maro izao… ankehitriny koa mitovy amin'izay toe-tsaina hanao “fampiasam-bola” izay ihany dia ireo mpitondra ireo ihany koa no mivarotra ny kolontsaina sy ny lovantsika…Azo antoka ny hiakiaky ny firenena malala…
Kivy tanteraka i Rich Wagaba :
Vao ny tranom-bakoka fotsiny aloha izao dia efa mahamenatra ny hoe inona no sisa avela ho lovantsika! Tsy vitan'ny hoe ny fiara voalohany ihany no hita ao fa ao koa ny ankamaroan'ny tantarantsika. Inona moa no antony tokony hanazavako izany indray… TRANOM-BAKOKA AN'NY FIRENENTSIKA IO!!! Tokony asiana resaka ve ny handravana azy?!.. Ampio aho fa tena kivy tanteraka.
Manentana hiarovana ny lovan'i Ouganda koa ny mpitoraka bilaogy. Manoratra i Jean Ankunda :
Anankiray amin'ireo andrin'ny firenena tsy azo tsinontsinoavina efa nisy teo nandritra ny fotoana ela ny tranombakoka. Ny endrik'ity trano ity dia nataon'ilay terantany alemana Ernst May efa maherin'ny 60 taona lasa izay ary misarika mpizahantany koa ity tranom-bakoka ity.
Ankoatra ny maha harem-pirenena azy, dia mitahiry ireo zavatra sy fitaovana niainan'ny tantara koa izy. Izy koa no loharanom-baovao amin'ireo toerana mitahiry kolontsaina miisa 650 manerana ny firenena. Midika izany fa ity tranom-bakoka ity dia toerana hianarana ny fiainan'i Ogandà ny kolontsainany sy ny lovany.
Geofrey Smith nandefa imailaka nosoratan'ny mpitahiry ny vakoka sy mpahay tantara any Ogandà (HRCI):
Miangavy anao aho hamaky sy hamaly ity soratra ity. Misy fiandohany ny lova! Miangavy anao hanaparitaka ity any amin'ireo olona rehetra miasa ao amin'ny tontolon'ny tranom-bakoka sy ho an'ny olona afaka hamonjy.
Ho antsika rehetra,
Ny Mozean'i Ogandà, antitra indrindra aty Afrika Andrefana, no horavana manomboka amin'ny 15 martsa ho avy izao raha tsy misy ny zavatra ataontsika dieny izao! Andiana mpandraharaha no mikasa handrava ny tranombakoka hatao tranoben'ny varotra. Hafahafa ihany ny tolon-kevitr'izy ireo hanome rihana roa amin'ilay trano vaovao hatsangana satria tsy eritreretiny ny fahateren'ny trano, ny tontolo iainanan'ny vakoka sy ny mety ho fahasimbany haingana ao anatin'ny fotoana fohy.
Zarao ny hevitrao mahakasika ny fomba hatao hampisy vokatra ny fanentanana:
Raha azera ny Mozean'i Ogandà dia tsy vitan'ny hoe very trano fantatra eran'izao tontolo izao fotsiny sy ny vakoka ao anatiny isika – fa very ampahana lova goavana izay nohariana nandritra ny 100 taona ary tsy ho hitantsika intsony. Mila fanamboarana sy fanarenana ny vakoka fa tsy mila fanapotehana ! Miaraha aminay hanavotra ny Ogandà. Aparitaho amin'ny olom-pantatrao rehetra amin'ny imailaka ity fanentanana ity sy any amin'ny media be mpiserasera, fikambanana, mpanakanto sy ny mpiaro ny vakoka. Isaorana sahady izay mety ho hevitra rehetra hahatonga ity fanentanana ity hahomby tanteraka.
Azafady alefaso amin'ireto adiresy ireto ny valinteninao:
1. Mr. Muyambi Ellady, Tale Mpanatanteraka (HRCI),Email:elladmuyambi@yahoo.com
2. Mr. Tumwesigye Robert Baganda,Tale (HRCI),Email:tumwesigyes@yahoo.com
Vali Jamal nandefa fanangona-tsonia navoakany tao amin'ny tranokala Africa-Orientalia. Nosoratan'ny mpitantana ny Mozean'i Ogandà teo aloha, Merrick Posnansky, izany taratasy fanangonan-tsonia izany:
Andiana mpandraharaha no mitady handrava tranombakoka izay naorina tamin'ny taona 1908, ary antitra indrindra aty Afrika Andrefana, hananganandry zareo Tranoben'ny Varotra. Rihana roa no omeny hanaovana tranom-bakoka, tsy mety ho an'ny vakoka ny efitrano, tery sady tsy ampy ivelarany. Eo ambany no ho hitanao ny taratasy nosoratako ho an'ny filoha ogandey. Manahy ny mpiasan'ny tranombakoka amin'ireto mpandraharaha manankarena ireto fa miray tsikombakomba amin'ny fanjakana izy ireo hangalatra ny tany. Manginy fotsiny avy eo ny fahaverezan-javatra amin'ny famindrana toerana ireo vakoka. Tsy misy mahalala mantsy hoe rahoviana no ho vita ity trano vaovao ity .
Hampiarahana amin'ny fanentanana dia manorata taratasy any amin'ny masoivohon'i Ogandà any amin'ny firenenao:
Manorata taratasy azafady, asio dika mitovy any amin'ny masoivohon'i Ogandà any amin'ny firenenao, hanehoanao ny mahakasika anao amin'ity raharaha ity. Tsy nisy fifampiresahana mihitsy tany Ogandà, satria matahotra ny fanjakana ny olona, kanefa raha tsy misy zavatra mitranga dia ho avy ny bilidaozera handrava amin'ny 15 martsa. Raha afaka mampiasa ny anaranao ianao hanoratana any amin'ny UNESCO, ICOM, na any amin'ny tranombakoka any amin'ny firenenao, hahazoana ny hevitr'izy ireo koa, dia azo antoka fa hanampy betsaka izany.
Ny tanjona dia ny tsy hisakanana ny fandrosoana akory fa ny hananganana izany tranoben'ny varotra izany any an-toeran-kafa.
Merrick Posnansky Mpampianatra tantara, UCLA
Farany, Jean Ankunda manamarika fa mitandro ny tranom-bakoka any aminy ny firenena mandroso noho ireo asany tsy misy mahasolo:
Tokony hajanona ny eritreritra handrava ity trano mirakitra ny tantaran'ny firenena ity ary hanoloana izany eritreritra izany dia tokony hisy ny drafitra mazava tsara hanomezan-danja ny tranom-bakoka hitarafana ny fiovana teo amin'ny kolontsainan'ny firenena sy ny lafiny sosialy ary ekonomika nandritra ny taona maro nifandimby.
Ny firenena mandroso rehetra dia mitandro fatratra ny tranom-bakoka tahaka itony noho ireo asany tena ilaina sy tsy misy mahasolo, anisan'izany ny fanangonana ireo fikarohana rehetra momba ny siansa sy ny fampianarana ary ny asa fikarohana hafa rehetra hanatsarana ny maha izy azy ny firenena iray.